नेपाल आज | यो अन्तर्वार्ता लगत्तै पक्राउ परे विप्लवका प्रभावशाली नेता नरबहादुर कार्की (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकैको एउटा होटल । हामीले त्यहीं नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका युवा नेता नरबहादुर कार्कीसंग अन्तर्वार्ता लियौं । अषाढ १० गते नेकपाले गरेको बन्दको पूर्व सन्ध्यामा अन्तर्वार्ता रेकर्ड गर्दा बाहिर प्राङ्गणमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति देखियो ।
करिब एक घण्टाको अन्तर्वार्ता रेकर्ड भैसकेपछि हामी निस्कियो । नयाँ बानेश्वर पुग्न नपाउँदै नेता कार्की पक्राउ परेछन् । उनलाई लछारपछार गर्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको त्यहाँबाट हामीले जानकारी लियौं ।
कार्की आफनो पार्टी भित्रका एक बैचारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हुन् । पक्राउ पर्नुअघि उनले खुलेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफनो पार्टीको दृष्टिकोण हामीसामु राखे ।
तपाईको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, आपराधिक समूह घोषणा गरिएको छ, थुप्रै कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्, केही त मारिएका छन् । तपाईंहरु भूमिगत कि खुल्ला ?
यो प्रश्नमा बडो फरासिलो मुद्रामा उनले भने, ‘ हामी जनताका सामु छौं । खुलेआम हिंडेका छौं । महासचिव विप्लव ज्यू पनि जनताका बिचमा हुनुहुन्छ । हामीलाई के को डर ? डर त निषेधको राजनीति गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, राज्यश्रोतको दोहन गर्नेलाई हुनुपर्छ । ’
हाम्रो लक्ष्य भनेको बैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो । अहिलेको संविधान र राजनीतिक दलहरुबाट हामीले परिकल्पना गरेको समाजवाद स्थापना हुँदैन । यीनीहरु विदेशीका गोटीका रुपमा देखा परेका छन् । यीनबाट विकास र समृद्धिको आशा गर्नु मूर्खता सिवाय केही होइन । बैज्ञानिक समाजवाद पक्षधर समूहले नै अब मुलुकको नेतृत्व गर्छ । यसका लागि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, गोपाल किरातीको नेकपा माओवादी केन्द्र, ऋषि कट्टेलको कम्युनिष्ट पार्टी लगायतसंग एकताको गृहकार्य भैरहेको छ ।
हामीलाई राजसंस्था फर्काउन लागेको भन्ने आरोप गलत हो । हामीले गणतन्त्र मानेका छौं, तर लुटतन्त्र होइन । हामी नयाँ राजनीतिक संरचनाबाटै मुुलुकको विकास गर्न चाहन्छौं, कुनै शक्तिविरुद्ध लागेको होइन । मुलुक र जनताको सुख शान्तिका लागि नै हाम्रो आन्दोलन हो ।
आन्दोलन गर्न पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । तर, हाम्रा कार्यकर्तालाई अपहरण गर्दै मुठभेडको नाउँमा हत्या गर्न थालिएको छ । भोजपुरमा एक र अर्का सर्लाहीमा मारिएका छन् । यो त राज्य बर्बरताको चरम नमूना हो । यसको विरोधस्वरुप हामी बन्द आयोजना गर्न बाध्य भएका हौं । राज्य दमनमा उत्रिनु निन्दनीय छ ।
हाम्रो महासचिव विप्लव निकै संयम हुनुहुन्छ । उहाँले आफना कार्यकर्ता मारिदा पनि प्रतिशोध लिनु भएको छैन । हिंसामा हामीलाई विश्वास छैन । तर, यो सरकार आफैले हामीलाई अपराधि घोषणा गर्यो । प्रतिबन्ध लगायो । एउटा राजनीतिक दललाई गर्ने व्यवहार यो हो ? सरकार आफै हिंसा मच्चाउन उद्धत भैरहेको छ ।
सरकारले अपराधिक समूह घोषणा फिर्ता गरी प्रतिबन्ध हटाउने र इमान्दारितापूर्वक संवाद गर्न चाहने हो भने हामी तयार छौं । हामीलाई सरकारले दुश्मन नै ठानेर व्यवहार गरी सिध्याउन खोज्यो भन्ने पनि हामीलाई लागेको छैन । हाम्रो उदारता र राष्ट्र प्रेमको उपयोग गर्ने काम त सरकारको हो नी !
हामीले चन्दा लिएका छौं तर कसैलाई जोरजबरजस्ती गरेका छैनौ । कसैले सहयोग गर्न चाह्यो भने त्यो सहयोग लिएर राष्ट्र हीतमा खर्चिनु गलत हो ? नेपालमा चन्दा नलिने कुन राजनीतिक दल छ ?
‘चन्दा लिनु बेठिक कि भ्रष्टाचार गर्नु बेठिक ?’ कार्कीले हामीतीर नै प्रश्न तेस्र्याए ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल निकै बढेको उल्लेख गर्दै नेता केसीले मुस्ताङमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको बर्दि लगाएर सैन्य अभ्यासका नाममा चीनको जासुसी गरिरहेको दावी गरे ।
उनी भन्छन्, ‘ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका गएर इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटिजीमा साइन गरेर आएका छन् । यहाँ हामी संलग्न छैनौ भनेर झूठ बोलिरहेका छन् । अमेरिकाको यो सैन्य गठवन्धनको नीति भनेकै नेपाललाई उपयोग गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नै हो । यो विषयमा नेपालको दोहोरो नीति देखियो । ’
चीनसंग ‘बीआरआई’ प्रोटोकलमा हस्ताक्षर र उता अमेरिकी सैन्य कमाण्डको पनि सदस्य हुनु नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट चर्को दवाव खेप्नुपर्ने स्थिति हुनसक्ने उनको आंकलन छ । अमेरिकाले ‘बिआरई’ मा सहभागी नहुन भनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दवाव सरकारमाथि सृजना गरिरहेको समेत कार्कीको विश्लेषण छ ।
यस्तै, सार्क र विमिष्टकको मामिलामा पनि नेपाललाई कठिनाइ भएको छ । तर, सार्क जसरी निस्कृय देखिएको छ भोलिका दिनमा विमिष्टेकको हालतमा पनि यस्तै हुने कार्की बताउँछन् ।
‘ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेललाई निस्तेज पार्नु र बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि क्रियाशिल हुनु सबैको राष्ट्रिय लक्ष्य हुनुपर्छ । हामी यो दिशामा जोश जाँगरले हिंडेका छौं, छिटो भन्दा छिटो परिवर्तन हुन्छ । ’ कार्कीले आत्मविश्वासका साथ भने ।
प्रचण्डलाई फेरि झुक्काइयो, कुर्सीमा तकिया खै ?